💕 FocusBeauty ရဲ့ Agent ဖြစ်ပြီး ၅ရက်အကြာ 💕
New Skiin Foam Cleanser ကို Skin Type အလိုက် ဒီလိုအရောင်လေးတွေ ရွေးခြယ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ 💛 Vitamin C (အဝါ) ပုံမှန် အသားအရေရှိသူများ၊ တင်းတိပ်မှဲ့ခြောက်ပျောက်ချင်သူများ၊ အသားအရောင် ညီညာလိုသူများ၊ အသားဖြူစင်ဝင်းပချင်သူများ အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။ Vitamin C ပါဝင်တာကြောင့် အသားရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး အမဲစက်များ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ 💙 Collagen (အပြာ) အသားအရေခြောက်သွေ့သူများ၊ အသားအရေတင်းရင်းလိုသူများ၊ အသားအရေ အစိုဓါတ် ထိန်းသိမ်းလိုသူများအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ Collagen ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိခြင်းကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို အကောင်းဆုံး ဆန့်ကျင်ပေးပြီး နုပျိုတင်းရင်းမှုကို ပေးစွမ်းပေးပါတယ်။ 💜 Salicylic Acid (ခရမ်း) အဆီပြန်သော အသားအရေရှိသူများ၊ ဝက်ခြံထွက်သော အသားအရေရှိသူများ၊ ဆားဝက်ခြံနှင့် အဆီဖုပျောက်ကင်းလိုသူများအတွက် အသင့်တော်ဆုံး မျက်သစ်ပါ။ Salicylic Acid က အရေပြားဆဲလ်အသေများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်ပိတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည် တစ်ဘူး ၉၅၀၀ ကျပ် (150 g)
New Skiin Foam Cleanser ရဲ့3Months Target Trip က ဒီလ August နောက်ဆုံးနော် 🥰 2020 June လ မှ August လအတွင်း New Skiin Foam Cleanser ဘူး 2000 ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့်လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Agent တိုင်းရရှိနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးဖြစ်လို့ ကြိုးစားကြမယ်နော် 💪
ဒီနေ့ ဘယ်သူရဲကောင်းလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လိုက်လဲ ... သင့်မျက်နှာအသားအရေကို ထိခိုက်မှုမရှိစေပဲ အပြည့်၀ဆုံး သန့်စင်မှုကို ပေးစွမ်းမယ့် New Skiin Facial Foam Cleanser. 150g တစ်ဘူး ၉၅၀၀ ကျပ်.
Nano Brush နဲ့အတူ Focus Beauty ကထုတ်တဲ့ Facial Foam ကိုမှ သုံးချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် Focus Beauty ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Brand ဖြစ်တဲ့ New Skiin Facial Foam Cleanser ကို ကိုးရီးယားစက်ရုံကနေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးလိုက်ပါပြီနော်. Collagen, Vitamin C, Sallicylic Acid ဆိုပြီး ၃ မျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်. 150 g ပါတဲ့ တစ်ဘူးကို ၉၅၀၀ ကျပ်နဲ့ ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ.